Bit By Bit - Hordhac - 1.1 bar ceeb khad An
Xilligii xagaaga 2009, telefoonnada gacanta waxay wici jireen dhammaan Rwanda. Ka sokow malaayiin wicitaano ah oo ka yimid qoyska, asxaabta, iyo asxaabta ganacsiga, qiyaastii 1,000 Rwandansan ayaa ka soo wacey Joshua Blumenstock iyo asxaabtiisa. Cilmi-baaristaani waxay baranayeen hanti iyo saboolnimo iyada oo samaysay sahan shakhsi ah oo ka kooban dad xogogaal ah oo 1.5 milyan macaamiisha ah oo bixiya adeegga telefanka gacanta ee ugu weyn Rwanda. Blumenstock iyo saaxiibada waydiisteen dadka aan kala sooc lahayn haddii ay rabaan inay kaqeybqaataan sahan, sharaxay nooca cilmi baarista iyaga, kadibna waxay waydiiyeen su'aalo taxane ah oo ku saabsan sifooyinka bulsheed, bulsheed, iyo dhaqaalaha.
Wax walba oo aan idhaahdo illaa hadda waxay ka dhigan tahay sida sahankan cilmi-baarista cilmiga bulshada. Laakiin waxa soo socda ee soo socda ma aha dhaqan-ugu yaraan weli. Marka lagu daro xogta sahanka, Blumenstock iyo asxaabtu waxay kaloo heleen diiwaannada dhamaystiran ee dhammaan 1.5 milyan oo qof. Isku-darka labadan ilaha xogta, waxay isticmaaleen xogta sahanka si ay u bartaan habka mashiinka wax lagu barto si loo saadaaliyo hantida qofka oo ku salaysan diiwaankooda wicitaanka. Marka xigta, waxay adeegsadeen qaabkan si loo qiyaaso hantida dhammaan macaamiisha 1.5 milyan ee macluumaadka. Waxay sidoo kale ku qiyaaseen in ay degan yihiin dhammaan macaamiisha 1.5 malyan oo isticmaalaya macluumaadka juqraafiyeed ee ku jira diiwaanka telefoonka. Dhamaan kuwan oo wada jir ah - qiimaha la qiyaasay iyo meesha lagu qiyaasey ee daganaanshaha - waxay awoodeen inay soo saaraan khariidado badan oo xaddidan oo ku saabsan qaybinta juqraafi ee Rwanda. Gaar ahaan, waxay soo saari karaan hantida qiyaastii mid kasta oo ka mid ah Rwanda oo ah 2,148 unug, qaybta ugu yar ee dalka ka jirta.
Nasiib darro, wax aan suurtagal ahayn in la xaqiijiyo saxnaanta qiyaasahaas sababtoo ah qofna weligiis yuu qiyaasin qiyaasaha yar ee juquraafi ee Rwanda. Laakiin marka Blumenstock iyo jalayaashu ay qiyaasayaan qiyaastooda 30ka Rwanda, waxay ogaadeen in qiyaasahoodu aad u la mid yihiin qiyaasaha Demographic and Health Survey, taas oo loo tixgelinayo inay tahay heerka qiimaynta ee dalalka soo koraya. Inkasta oo labadan hab ee soo saarey qiyaaso la mid ah kiiskan, habka Blumenstock iyo asxaabta waxay ahaayeen qiyaastii 10 jeer oo dhakhso ah iyo 50 jeer ka jaban daraasada Demographic iyo Caafimaadka ee caadiga ah. Qiyaasahaas kharashka badan ee degdega ah iyo hoos u dhaca qiimaha ayaa abuuraya fursado cusub oo cilmi-baarayaasha, dawladaha iyo shirkadaha (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Daraasadani waa nooca sida Rorschach inkblot test: waxa ay dadku u arkaan waxay kuxirantahay asalkooda. Dad badan oo saynisyahanno ah ayaa arkaya qalab cusub oo loo isticmaali karo in lagu tijaabiyo aragtida ku saabsan horumarinta dhaqaalaha. Cilmi-baarayaal badan oo badan ayaa arkaan dhibaatada barashada mashiinka cusub. Ganacsiyo badan ayaa arkaya qaab awood leh ee qiimaha furitaanka ee xogta weyn ee ay hore u soo aruuriyeen. Qaar badan oo ka mid ah qareennada gaarka ah waxay arkayaan xasuusin cabsi leh oo aan ku noolnahay waqti ilaalin wayn. Ugu dambeyntiina, siyaasiyiin badan oo badan ayaa arkaan habka tiknoolajiyada cusubi ay gacan ka geysan karto abuurista adduun ka wanaagsan. Dhab ahaantii, daraasaddaani waa wax walba, iyo sababta oo ah waxay leedahay isku dhafka dabeecadaha, waxaan u arkaa daaqad mustaqbalka cilmi bulsheed.